Hihamafy ny fitakina : tsy hamoaka ny valim-panadinana ny Seces | NewsMada
Détournements des aides sociales: Le président lance une sévère mise en garde ...août 5, 2020
Niantso “renfort” FIGN mihitsy ny zandary: Tezitra ireo tsy nahazo Vatsy Tsinjo, tapaka ny lalana ...août 5, 2020
Hihamafy ny fitakina : tsy hamoaka ny valim-panadinana ny Seces
Par Taratra sur 13/01/2018
Mitohy ny fitakiana ary hihamafy aza. Mahatsiaro tena ho tsy henoin’ny mpitondra ireo mpampinatra mpikaroka ka nampiaka-peo manoloana ny tsy fahitan’izy ireo valiny avy amin’ny minisitera.
“Tsy hamoaka ny voka-panadinana izahay araka ny tapaka tamin’ny fivoriana natao. Tohin’ny fampiatoana ny fampianarana sy ny fikarohana efa natao ny volana desambra teo izany raha tsy mivaly ny fitakianay”, hoy ny eo anivon’ny Seces Antananarivo, afakomaly, teny Ankatso. Nohitsin’izy ireo fa anisan’ny tsy mbola azo ny tambin’ny fikarohana ho an’ireo mpampianatra mpikaroka mbola manao ny asa fikarohana sy ny tambiny ho an’ny ora fanampiny iasan’izy ireo.
Tratry ny bemarenin’ny fanjakana
Efa nisy ihany ny dinika sy fifampiresahana tamin’ny tompon ‘andraikitry ny minisiteran’ny Fampianarana ambony saingy tsy nahafa-po izany. “Tsy nisy valiny azo tsapain-tanana ka antony nandraisana ny fanapahan-kevitra, tsy hamoaka ny valim-panadinana”, hoy ihany ny filohan’ny Seces sampana Antananarivo, Ravelonirina Sammy Grégoire. Tratry ny bemarenin’ny fanjakana indray izany ireto mpampianatra mpikaro ireto.
Etsy andaniny, naato koa ireo mpikambana telo eo anivon’ity sendikà ity noho izy ireo tsy manaraka ny fifampifehezana sy ny fiandaniany amin’ny mpitondra. Niainga tamin’ny latsa-bato natao izany nanilihana azy ireo izany ka maherin’ny 150 ireo nampiato amin’ireo mpikambana 170 eo anivon’ny Seces Antananarivo.
Détournements des aides sociales: Le président lance une sévère mise en garde 05/08/2020
Niantso “renfort” FIGN mihitsy ny zandary: Tezitra ireo tsy nahazo Vatsy Tsinjo, tapaka ny lalana teny Bemasoandro 05/08/2020
Tsena iraisam-pirenena: ratsy toerana ny lavanila avy eto Madagasikara 05/08/2020
Jirama: hampiana ny tranon-jiro eny Itaosy 05/08/2020
Fitaterana: mangataka hizarana fanampiana ireo kaoperativa 05/08/2020